Home News shacabka ku nool Magaalada Baydhabo oo muujiyay sida ay kaga xun yihiin...
shacabka ku nool Magaalada Baydhabo oo muujiyay sida ay kaga xun yihiin Doorashadii ka dhacday Baydhabo
Shacabka deegaanada Koofur Galbeed ayaa si cajiib ah kaga jawaabay doorashadii madaxweynaha Koofur Galbeed iyo sida aysan ugu qanacsaneyn natiijada kasoo baxday doorashadii shalay.
Shacabka ayaa muujiyay sida ay u faarujinayaan magaalada Baydhabo mar haddii la doortay madaxweyne C/casiis Lafta Gareen oo aysan ku qanacsaneyn doorashadiisa, waxaana ay aheyd fal celin maad ah “Kaftan”.
Qaarkood ayaa isku soo sawiray iyagoo wata alaabadooda iskana dhigaya ineey magaalada Baydhabo ee gobolka Baay ka qaxayaan Mar hadii la doortay shaqsi Aan ku imaan rabitaankooda, sida ay matalayeen.
Shacabka ayaa taageero buuxdo u hayay musharixiinta kale oo uu kamid ahaa Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur oo ku xiran magaalada Muqdisho.
Previous articlemaxaa ka cusub Magaalada Jowhar
Next articleRag looga shakiyay Daacish iyo Al Shabaab oo lagu qabtay Bosaasso
Wasiir Goodax oo Cadaadis xoogan kala kulmaya maamul Goboleedyada